Home Ogeysiiska DCMA
Ogeysiiska Sharciga Millennium Digital Digital Millennium (DMCA).
LifeBogger, waxaan ixtiraameynaa xuquuqda lahaanshaha lahaanshaha waxaanan la shaqeyn doonaa iyaga si aan u hubinno in waxyaabaha (kuwa) jebiya xadgudubka laga saaro adeegeena. LifeBogger waxaa ku jira sheekooyinka carruurnimada iyo wixii loo yaqaan 'Taariikh nololeedka' 'Taariikh nololeed' Xaqiiqooyinka kubbadda cagta. Haddii aad aragto mid uun, fadlan u soo dir emayl leh dhammaan faahfaahinta ku habboon dareenka “Ku xadgudubka Xuquuqda Xuquuqda daabaca” iyada oo loo marayo noloshabogger@gmail.com. Waxaan qaadi doonnaa ficil deg deg ah oo sixitaan ah.
Ogeysiiska Millennium Digital rights (DMCA) Ogaysiiska wuxuu u baahan yahay in sheegasho kasta oo la jebiyo ay tahay mid qoraal ah oo ay kujirto qaybtan macluumaad ee soo socda:
Saxeexa jireed ama elektiroonig ee milkiilaha xuquuqda daabacaada ama qofka loo idmaday inuu u matalo isaga oo matalaya.
Faahfaahin wanaagsan oo ku saabsan shaqadan daabacan ee la sheegay in lagu xadgudbay LifeBogger.
Sharraxaadda waxyaabaha jebinta iyo macluumaadka. Tani waa inay macquul ahaanta ku filnaato si loogu oggolaado LifeBogger inay soo hesho maaddada
Macluumaadkaaga xiriirka si LifeBogger si fudud kula soo xiriiri karto.
Bayaan adiga kuu sheegaya inaad aaminaad fiican uleedahay aaminaada isticmaalka aaladda aanuu ogolaanin milkiilaha xuquuqda daabacada
Bayaan in macluumaadka ku jira ogeysiinta ay sax yihiin. Waxaa taas sii sii dheer, iyada oo la raacayo ciqaabta been abuurka, in macluumaadka aad na siiso uu sax yahay oo aad adigu tahay milkiilaha xuquuqda daabacaadda ama laguu oggolaaday inaad ku shaqeyso magaca milkiilaha xuquuqda daabacaadda.
LifeBogger Waxaan sameyn doonaa si aad u wanaagsan jawaabta "dhammaan codsiyada hoos udhaca”Oo la jaan qaadaya shuruudaha Xuquuqda Millennium Digital rights (DMCA), iyo shuruucda kale ee hantida aqooneed ee la dabaqi karo.